CompanyHub CRM Integration - 1000 + Ngwa | Gbalịa Ugbu a!
Ụlọ ọrụ CompanyHub
Mụ na CompanyHub ị ga-enweta njikọ na-enweghị ntụpọ na ngwa niile a na-ewu ewu
Zapier na-enye gị ohere ịmekota akaụntụ gị CompanyHub na ọtụtụ puku ngwa iji mekwuo arụmọrụ gị. Ị nwere ike ijikọta ngwa ndị dị ka MailChimp, Ndenye Akwụkwọ, Slack na otutu ihe iji mee ka ọrụ niile na-agwụ ike rụọ ọrụ gị.
Na PieSync ị nwere ike ijikọ ngwà igwe ojii gị na mmekọrịta 2-ụzọ nwere ọgụgụ isi. PieSync ga - enyere gị aka ịkekọrịta kọntaktị ndị ahịa n'etiti ahia azụmahịa gị, Email Marketing, Ịkpọsa na E-Commerce ngwa ọdịnala.
Ka usoro CRM ọ bụla nye ezigbo ndị ahịa 360 na onye na-enye maxium ROI, ọ dị mkpa ịnye mwepụ na-enweghị ihe ọ bụla na ngwa ngwa ọ bụla dị mkpa. Ụlọ ọrụ CompanyHub REST API ga - enyere gị aka ime nke ahụ. Ya na CompanyHub API gwakọtara ngwa ngwa ngwa oru gị ma nweta ihe omuma ị chọrọ.
CompanyHub na-enye gị obere koodu ntinye. Jiri koodu a mepụta ụdị na ebe nrụọrụ weebụ gị, ma na-anọdụ ala ma zuru ike. Ozugbo onye nleta gị na-abịa na ebe nrụọrụ weebụ gị ma nyefee ụdị ahụ, a ga - emepụta onye nleta gị ka ọ bụrụ ụzọ ọhụrụ na akaụntụ CompanyHub gị, WebHub Web na-eduzi ụdị na - emepụta ụzọ kachasị ngwa na ụzọ kasị mma iji tọghata ndị ọbịa gị niile .
Ụlọ ọrụ CompanyHub na ...
Gmail na Google na kalenda